Semalt: IiWebhusayithi ze-WordPress Uhlobo olungazenzayo
I-WordPress yenye yeenkqubo eziphathekayo zolawulo lwezinto eziphathekayo kwaye unceda ukwakha iiwebhusayithi ezizodwa kunye nebhulogi. Ngokusekelwe kumanani ambalwa nje, i-WordPress isetyenziswe abangaphezu kwee-70 zeeplogger kunye ne-webmasters emhlabeni wonke. Ngaphambi kokuba wakhe isayithi, uya kufuna igama le-domain kunye nokubamba. Ekugqibeleni, zonke izixhobo ezikhoyo, iindikimba kunye neeplagi ziya kukuvumela ukuba uhlakulele iwebhusayithi ekhangayo, ukusuka kwiiblogi zomntu kwiimpawu ezidumiweyo kwi-intanethi.
U-Oliver King, ingcali ehamba phambili ye-12 (Semalt , ubonisa ukuba ukhangele iindidi zewebhusayithi ongazisebenzisa usebenzisa i-WordPress - tech support jobs in oregon.
1. Ibhulogi kunye neZiko lomntu
I-WordPress yaqala uhambo lwayo njengeqonga lokubloga kwaye liguquke kwinkqubo yokulawula izinto ezinamandla. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, amakhulu kumashumi amawebhusayithi kunye neeblogi eziye zakhiwa usebenzisa i-WordPress. Baye baphuthunyiswa, bavuthiwe kwaye banolwazi ngakumbi kunanini ngaphambili kwaye unokufunda okuningi kwiiblogi. I-Wordpress inezixhobo ezininzi kunye neengqikithi zokukhetha, kwaye unokukwazi ukuphuhlisa lula iblogi okanye indawo.
2. Ibhizinisi leShishini
Kubantu abashishini kunye neemveliso, i-WordPress yindlela ehamba phambili kunye neyona ndlela ilula kakhulu yokuphuhlisa amasayithi akhangeleyo ngaphakathi kwemizuzu. Phantse zonke iimveliso ezinkulu kunye neenkampani sele zisetyenziselwa iWindowsPress ukunika amandla amasayithi abo njengoko kubanika amathuba amaninzi okukhulisa ishishini labo.
I-Wordpress sele ibe isisombululo-kwaye isinceda ukwakha i-e-commerce sites. Iiplagiza kunye neengqungquthela zayo ezenza ukuba kube lula kuwe ukuphuhlisa iziza ozikhethelayo. Ezinye zeeplagi ezidumile ziyiWooCommerce, iWPEcommerce, kunye neEasy Digital Downloads, ezinceda ukuguqula indawo yakho ibe yiplani ye-e-commerce esebenzayo ngokupheleleyo. Kukunceda ukuba wamukele iintlawulo ze-intanethi, ulawulo lwempahla, irhafu, ukuthumela, kunye nabaxhasi bakho phantsi kophahla olulodwa..
4. Ibhodi yeJob
Ukuba ukhangele ukuphuhlisa ibhodi yomsebenzi kwi-intanethi, unokuzama ukusebenzisa i-WordPress. Ezinye iiwebhusayithi ezidumileyo njengeProblogger kunye neSmashing Magazine zisebenzisa i-WordPress ukuphuhlisa amasayithi akhangelekayo. Le nkqubo yokulawula umxholo ivumela ukuba senze amabhodi emisebenzi apho abaqeshi bangakwazi ukuthumela khona uluhlu lwemisebenzi, kwaye abaqeqeshi banokufaka isicelo kwi-intanethi.
Njengeebhodi zamsebenzi, kukho imfuno ephezulu yeenkcukacha zoshishino, kwaye i-WordPress inomqolo omkhulu weefowuni zekhompyutheni zoshishino ozikhethayo. Unokwenza kwakhona iirejista zewebhu ezingayi kukhawulelanga kwishishini elinye.
6. Umbuzo kunye neMpendulo Iwebhusayithi
Ukuba ufuna ukudala iStack Exchange, i-Quora ne-Yahoo iimpendulo, i-WordPress ingenza umsebenzi wakho ube lula. Hlanganisa izixhobo ezahlukeneyo zolawulo lwenkqubo kunye neeplagi kwaye uqalise kunye noluntu olukhulayo lwe-intanethi.
7. IiNdawo zeZiko ezingekho kwiNkqubo kunye neNkolo
Nge-WordPress, kukhawuleza kwaye kulula ukudala ii-site ezingenanzuzo kunye nezenkolo. Unayo iiplagizi ezithile, kwaye unokongeza amafomu anikezelayo kunye nokuphakamisa imali kwiifom lula. Kwakhona, ungamkela iminikelo nge-PayPal, kwaye konke oku kungenxa ye-WordPress.
8. IiWebhsayithi zePortfolio
Ukuba ufuna indawo efanelekileyo yokubonisa iphothifoliyo yakho, kufuneka uyifake kwisiza sakho seWindowsPress. Le yodwa yenkqubo yokulawula umxholo ekunceda ukuba wenze iifriji zemifanekiso ezintle kunye neendlela ezimangalisayo ukuze ihlabathi likwazi malunga nobuchule bakho kunye neetalente.
9. Iiwebhusayithi zeKhuphoni
Ukuba ufuna ukufumana ii-commissions ezibandakanyekayo ukusuka kumakhulu ukuya kumawaka eesayithi ezinikezela izaphulelo ezikhethekileyo kwimveliso kunye neenkonzo zazo, kufuneka udale iwebhusayithi yakho yekhuphoni uze uqalise. I-Wordpress ikuvumela ukuba wongeze, uphathe uphinde uphelele ama-coupon online. Unokulinganisela kwaye uvote amakhuphoni akho, kwaye konke oku kwenziwa ngepaneli yomphathi we-WordPress.
10. IiNwebhusayithi zeAndon
Ukuba ufuna i-website efana ne-eBay apho iindawo zentengiso zigcinwa imihla ngemihla, ungasebenzisa i-WordPress ukudala isayithi lakho leevenesi esebenzayo ngokupheleleyo. Abasebenzisi banokubhenela, benze iintlawulo ngeendlela ezikhuselekileyo kwaye uya kuzuza amaninzi kwisayithi yeeyunivesithi.